Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Desambra 2019
Tantara tamin'ny Desambra, 2019
Afrika Mainty27 Desambra 2019
"Badalela mibadabada aho, tena olana iray goavana be amin'ny fitenenana sy ny fifandraisana...andro no nisaina dia tafavoaka tanteraka tamin'izany aho"
Tena zavadoza tokoa ve ireo vaksiny andrana hanoherana ny Ebola?
Manamafy ny hetsika ataony ny vondrompiarahamonina iraisampirenena mba hamongorana ilay valanaretina. Marobe ireo firenena nilaza fa nahita vaksiny na fanafody ary efa nampiasainy sahady tsy nanaraka ny zotra fanao takiana ho an'ny fanafody rehetra.
Azia Atsinanana27 Desambra 2019
Rehefa Oktôbra, feno vorona mpifindra toerana ny lanitr'i Kôlômbia
Amerika Latina27 Desambra 2019
Mandritra ny volana Oktôbra, toerana itazanana seho iray goavana ny lanitr'i Kôlômbia noho ny fifindran-toeran'ireo vorona marobe toy ny ankoay sy ny voromahery.
Lasibatry ny finoanoam-poana ny sola loha, hoy ny polisy ao Mozambika
Hoy ny bilaogera iray nanoratra hoe "[Maniry] ny firenena aho mba hisian'ny olona hitady asa mendrika ary tsy mandratra na manaisotra mihitsy ny ain'ny hafa,"
Ginea: noho ny viriosy Ebola, hopitaly iray manontolo no nakatona
Antokon-draharaha iray manontolo any anatin'ireo hôpitaly lehibe ao Kônakry no tsy miasa intsony rehefa nahitàna tranga vaovao-nà viriosy Ebola
Tetezana mampitohy an'i Krimea sy Rosia, tsy mbola misy akory dia efa manana kaonty Instagram
Eoropa Afovoany & Atsinanana26 Desambra 2019
Mitondra zavatra iray fanampiny amin'ny fifandraisana ety anaty media sôsialy ho an'ny asa fanorenana tetezana iray ny saka, indrindra fa ho entina mamilivily ny saina tsy ho any amin'ireo fahataràna sy ny halafony.
Etazonia26 Desambra 2019
Azia Atsinanana26 Desambra 2019
Fahalalahana # Fanarahamaso : Toerana toy inona no homena ny fifampiresahan'ny kolontsaina isankarazany ao amin'ny Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia?
Eoropa Andrefana26 Desambra 2019
Vovonana Erantany ho an'ny Demaokrasia tao amin'ny Filankevitr'i Eoropa tao Strasbourg, 18-20 nov., Lohahevitra: "Fahalalahana # fanarahamaso : mba hahazoana valiny demaokratika".